Waa kee waddanka ugu waxbarasho fiican caalamka? | Xaysimo
Home War Waa kee waddanka ugu waxbarasho fiican caalamka?
Jawaabta saxda ah ee su’aashaas in la helo way adagtahay, laakiin waxaa tusaale aad u fiican laga heli karaa barnaamijka tijaabada ardayda ee caalamiga ah, oo magaciisa afka ingiriiska loo soo gaabiyo (Pisa).
Tan iyo markii howshan la billaabay oo ahayd sanadkii 2000, waxaa saddexdii sano ee kastaba la siinayay arday ay da’doodu tahay 15 sano.
Hay’adda maalgalisa barnaamijkan, oo lagu magacaabo OECD waxay ka kooban tahay 37 waddan, oo ah kuwa sida weyn horumarka u sameeyay, waxaana ka mid ah Mareykanka, Japan iyo dalalka Midowga Yurub.
Ardayda ayaa imtixaanka lagu soo hordhigaa su’aalo ku saleysan nolosha dhabta ah, kuwaasoo la eego sida ay uga shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya aqoontooda waxbarasho.
Waxyaabaha la weydiiyo waxaa ka mid ah sida ay u qaadanayaan go’aannada la xiriira dhinaca maaliyadda iyo kuwa macluumaadka.
Tusaale ahaan, sanadkii 2018-kii, mid ka mid ah su’aalihii lagu tijaabinayay cilmiga wax akhrinta ee ardayda waxay ahayd mid ku saleysan sheeko la diyaariyay oo la xiriirta dhinaca internet-ka, taasoo nin digaag leh uu doonayay inuu ogaado inay sax tahay in mid ka mid ah digaaggiisa uu siiyo kaniiniga loo yaqaanno aspirin-ka.
Mas’uuliyiinta waddankaas ayaa adeegsaday natiijada ardaydii magaalada Shanghai oo kaliya, sanadihii 2009-kii iyo 2012-kii – halka sanadihii 2015-kii iyo 2018-kii ay xisaabiyeen ardayda kasoo kala jeedday afar gobol oo kaliya.
“Goobahan, ardayda ku wanaagsan dhinaca isdhexgalka bulshada ayaa ka natiijo fiicnaa kuwa kale, marka ay noqoto xirfadda wax akhrinta., sida uu bayaan ku sheegay Andreas Schleicher, oo ah agaasimaha OECD ee Shiinaha.
Estonia ayaa ahayd waddanka ugu sarreeya marka laga soo tago dalalka qaaradda Aasiya
Sida guud, gabdhaha ayaa dhinaca akhriska “si aad ah” uga fiicnaa wiilasha, waxayna sidoo kale uga sarreeyeen maaddooyinka Seyniska.